Crypto zvokutengeserana App Robinhood anotangazve mu Colorado - Blockchain News
Kubvumbi 22, 2018 arun
Kukwikwidzana nzvimbo nokuda cryptocurrency exchanges huri kufambira mberi muUnited States. Startup Exchange Robinhood chete zvakaziviswa pamusoro Twitter kuwedzera yawo Colorado. The zvokutengeserana kuchikuva yave chakashama tichitarisa commision isina zvokutengeserana nokuda Bitcoin mu Colorado.
Kuwedzera cryptocurrencies, ari Palo Alto, Calif.-inobva zvokutengeserana pachikuva inotsigira mumatanda, ETFs uye mikana.
Colorado, iyo inozivikanwa Rocky Mountain nenhongonya uye blockchain-ushamwari mutemo, anobatana tsama rinoti asiwo California, Massachusetts, Missouri uye Montana, zvose izvo Robinhood akawedzera mukuvamba April sorutivi ezvinhu-ne-hurumende rollout zvinofamba pamwe.
Previous Post:Bitcoin ATM samambure Coinsource inoshanda pamwe multi-chinhu authenticator Acuant
Next Post:Iran pamutemo dzairambidzwa basa redu kushandiswa cryptocurrencies
Chivabvu 18, 2018 pa 2:37 AM
Chikumi 3, 2018 pa 3:06 AM